Dastabej » ढिकी, ढडिया र रोग बारे पढाई
ढिकी, ढडिया र रोग बारे पढाई – Dastabej
ढिकी, ढडिया र रोग बारे पढाई
ठाकुरबाबामा नमुना पढाई, व्यहार र संस्कार सिक्दै बालवालिका
बर्दिया । भाईबहिनी हो । धान कुट्ने ढिकी, माछा फसाउने ढडिया देखेका छौ ? पुर्खाको यस्ता परम्परागत प्रविधि करिबकरिव लोप भइसक्यो । संस्कृति र संस्कार पनि ओरोलो लागिसक्यो । सांस्कृतिक परम्परा एवं प्रथा, पुस्तान्तर तथा स्थानीय ज्ञान, लोक नृत्य ( परम्परागत थारु नृत्यहरु, डेउडा, पञ्चेबाजा) धरापमा छ । यही कुरा मध्य नजर गरी ठाकुरबाबा नगरपालिकाले तिमीहरुजस्तै कक्षा १ देखि ५ सम्मका बिद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी पाठ्यक्रम लागु गरेको छ । पाठ्यक्रमको नाम हाम्रो ठाकुरबाबा राखिएको छ । यहाँका बालवालिकालाई स्थानीय परम्परा, संस्कार, संस्कृति, चाडपर्व र व्यबहारिक शिक्षा सिकाउन पाठ्यक्रम लागु गरिएको हो । स्थानीय सरकारले आफ्नै गाउँठाउँको परम्परा, संस्कृति र व्यवहारिक ज्ञानलाई समेटेर तयार गरिएको पाठ्यक्रम प्रदेश न. ५ कै पहिलो भएको दाबी गरिएको छ । हाम्रो संस्कृति र प्रविधि शिर्षकमा मुख्य समुदायका चाडपर्व, भाषा (थारु, नेपाली), समुदायका सांस्कृतिक परम्परा एवं प्रथा, पुस्तान्तर तथा स्थानीय ज्ञान, लोक नृत्य (थारु नृत्यहरु, डेउडा, पञ्चेबाजा), स्थानीय प्रविधिहरु माछा समाउने हेल्का लगायतका प्रविधि, ढिकी बारे सिकाइएको छ ।
नगरपालिका प्रमुख घननारायण श्रेष्ठले पछिल्लो पुस्ताले परम्परा र व्यवहारिक ज्ञान बारे जानकारी नपाउँदा बिकृती बढ्दै गएको बताए । उनले नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न धर्म, संस्कृति बारे जानकारीसंगै विकास, वातावरण, पोषण लगायतका विषयहरु पाठ्यक्रममा समाबेश गरिएको जनाए । ‘यसअघि जारी गरिएको पाठ्यक्रममा नसमेटिएका विषयबस्तुलाई हामीले ल्याएको स्थानीय पाठ्यक्रममा राखेका छौँ । यसले नयाँ पुस्तालाई धेरै कुराहरु सिकाउन सहयोग गरेको छ,’ उनले भने,‘प्राकृतिक स्रोत साधन र नगरपालिका गठन बिधि बारे पनि पाठ्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।’
कक्षा ५ को हाम्रो ठाकुरबाबा पाठ्यक्रममा नगरपालिकाको सामाजिक, भौगोलिक र जनसंख्याको बनोटबारे जानकारी दिइएको छ । त्यससंगै यस क्षेत्रमा सन्चालित पेशा, व्यवसाय, प्रवद्र्धनका उपाय, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, विविधताभित्र एकता रहेको सन्देश दिइएको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिको एतिहासिक विकासक्रम बारे व्यख्या गरिएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको परिचय, महत्व र संरक्षणका उपाय र हरित विद्यालयको आवश्यकता र महत्व बुझाइएको छ । ‘कला र संस्कृतिको महत्व र संरक्षणका उपाय बारे पनि कितावमा जानकारी दिइएको छ । समाजमा बिकृत बढ्दै गएकाले संस्कृति संरक्षणमा बढी जोड दिएका छौै,’ नगरपालिका प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्,‘ दिगो विकास र वातावरण संरक्षणलाई पनि जोड दिएका छौ“ ।’उक्त पालिकामा २७ सामुदायिक र १५ संस्थागत बिद्यालय छन् । उनले स्थानीय पाठ्यक्रमले बालवालिकालाई जीवन उपयोगी ज्ञान दिएको जनाए । विभिन्न रोग बारे पनि जानकारी राखिएको छ । वातावरण संरक्षणका उपाय, स्थानीय जडीबुटी र महत्व, पोषणजन्य समस्या, सुनौला हजार दिनको परिचय राखिएको छ । हावापानी, वनस्पति, जनसङ्ख्या जात जाति, महिला÷पुरुष जनसङ्ख्या वनोट लगायतका बारेमा ज्ञान दिइएको छ । नगरपालिकाको वन जंगल , नदीनाला, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल, जलीय पारिस्थितिक प्रणाली, सांस्कृतिक कलाकृति र सङ्ग्रहालयलाई पनि पाठ्यक्रममा समेटिएको छ । स्वस्थ घर, पूर्ण सरसफाइ बिधि पनि समेटिएको छ । वंशाणुगत रोगहरु सिकलसेल, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र दम, रोगका असर तथा रोकथामका उपाय योग, ध्यान र शारीरिक व्यायामको महत्त्व र स्थानीय खेलले पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । केन्द्रले निर्माण गर्ने पाठ्यक्रमले स्थानीय विविधता समेट्न नसक्ने भएकाले शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई सम्वोधन गर्न स्थानीय पाठ्यक्रम ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
१२ असार २०७८, शनिबार १२:२६ प्रकाशित